အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ခွဲခွာသွားသူနှင့် အလွဲတစ်ခု
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:45 PM
ပြန်လာမှာပါ ဗျ :)
aww... than yaw zin kyi lite tar Too yal :(
hope u r not crying while posting this one!
I'm sure He will be missing u guys too.
အမှတ်တရပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါကွာ.... တစ်နေ့တော့ငါတို့တွေပြန်တွေ့ကြအုန်းမှာပါ ... အဲဒီအခါကျ မင်းကအေစီနော် ငါကမန်ယူ... တစ်ပွဲတစ်လမ်းလောက်တော့ အကဲစမ်းလိုက်ချင်သေးတယ်.. ခုချိန်မှာ ငါစကားတွေ အများကြီးပြောမထွက်တာကိုတော့ နားလည်ပေးပါကွာ eot လုပ်ပေးခဲ့တဲ့မင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လွဲခဲ့တဲ့အလွဲလေးကိုလည်း ငါအမှတ်ရနေမှာပါ ... :(
ဒီအကြောင်းကို သူအွန်လိုင်းမှာပြောပြတုန်းက တစ်ခါ သိပြီးပြီဗျ အဲ့အဖိုးကြီးက ဂလိုပဲ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ရယ် မိန်းမရပြီးမှ ပိုဆိုးးး) အစ်ကိုရေ့ ကျနော်တို့တွေ လည်းတစ်နေ့ တော့ ဒီရပ်ဝန်းလေးကို နှုတ်ဆက်ကြရမှာပဲလေ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံက လွဲလို့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးနော်း(
အဲဒီမုန်တိုင်းပေါ့... ငါတို့ကို အိပ်မက်ပေးသွားတာ....
အဲဒီမုန်တိုင်းပေါ့... ငါတို့ကို အမှတ်တရတွေနဲ့ ထားခဲ့တာ။
အဲဒီမုန်တိုင်းပေါ့... ငါတို့ကို အနိူင်နဲ့ပိုင်းသွားတာ
Man U ဒိုင်းကြီး ပိုက်ပြီးတော့ပေါ့.......
Inn grade 10 ka gabyar ko twe tadi ya mi tal. For men may go and men may come, but I go on forever.. so lar :) arr lone ta yarr ne hpye kya bar naw :) :P
ဘာမှပြောမထွက်တော့ပါဘူးကွာ ငါတို့ကိုသံယောဇဉ်တွေပေးပြီးခုတော့ထားသွား ပြီ ကွာ ..........
ကိုနွေမုန်းတိုင်နဲ့ အမြဲတမ်း အစ်ကိုရဲ့ အတင်းတွေအုပ်နေကျ အစ်ကိုကြောင့် သူဘလော့တွေလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ၊ အကို စာရေးကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကို အမြဲတမ်းပြောနေကြတယ်။ နောက်ကျရင် ညီမလေး အကိုစာရေးကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေ ဘယ်သူ့ကို သွားပြောရမှာလဲဟင်။
came to read it..
စေတနာအလွဲလို့ပဲ ခံယူလိုက်ဗျာ...။ ထူးအိမ်သင်က ဒီလိုဆိုထားတယ်...။
နေတတ်ရင် အေးဆေးလေး´ တဲ့
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ .. တွေးတွေးရင်း ရယ်မိတယ်..
အစ်ကို ရယ်လဲရယ်ရတယ်။ ကိုနွေးမုန်တိုင်းကြီးကိုလွမ်းလဲလွမ်းတယ်။
[p]Compared to those products prices you normally find at retail stores, prices offered by outlet stores are cheaper and more [url=http://www.uggssbottespascher.info]ugg pas cher du tout[/url] reasonable . This step is performed at room temperature, around 25 degrees Celsius, and aroundapH of2. Ugg boots can be expensive, [url=http://www.uggsoldescanada.com]ugg soldes femme canada[/url] however, there are places you can find Ugg boots on sale or foradiscounted price . Hearing the matter, [url=http://www.uggssbootscanada.info]ugg boots canada sale[/url] officials said: "the evidence overwhelmingly supports the recommendations of the UGG isageneric term, the Word can be used to describeaparticular Sheepskin boots, UGG is one of the first and most natural ways to describe these boots" . UGG Classic Short Boots-Eternal Fashion Trend for Every OccasionMore and more [url=http://www.cheapuggsbootsukonline.co.uk]cheap ugg boots uk[/url] girls pay attention to what shoes they should go for . children sizes are recognized to suit real [url=http://www.authenticuggaustraliaboots.co.uk]authentic ugg australia boots[/url] to size . We hope [url=http://www.cheapuggbootukonline.co.uk]cheap ugg boots uk[/url] the above 11 tips have taught you how to tell fake ugg boots from real ugg boots . In other words, the advertisements for nike shox fetched [url=http://www.kiduggboot.co.uk]cheap kids ugg boots uk[/url] in massive consumers . They are fabricated out of affidavit which is the absolute insulator to accumulate your anxiety warm.[/p]